Long pole - China Suzhou Lihui Engeering
Ashpalt paver ọnwụ sọ
Igwe ọnwụ sọ
Road ala ọnwụ sọ
Bomag roba echekwa
Laghachi pole maka-egwe ọka ígwè ọrụ. W100, w100H, W1000F, W1200F, W1900, W2000, W2100, W2200. Iji hụ na ala-na-esemokwu nrugharị ebu eriri. Easily kemwepu njikọ na-eme ka na-agbanwe agbanwe ala a dị mfe ọrụ. N'ihi ya, na-eme ka ebu belt nwere ike rachighaa a elu ebu ike na ala ike oriri. The mfe attachable abaghị uru pole na koo uzo ana achi achi na-abaghị uru ebu ikike.
FOB Price: US / Ibe
Min.Order ibu: 1Piece / iberibe
Tụkwasịnụ Ikike: 5000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Laghachi pole maka-egwe ọka ígwè ọrụ. W100, w100H, W1000F, W1200F, W1900, W2000, W2100, W2200.
Iji hụ na ala-na-esemokwu nrugharị ebu eriri. Easily kemwepu njikọ na-eme ka na-agbanwe agbanwe ala a dị mfe ọrụ. N'ihi ya, na-eme ka ebu belt nwere ike rachighaa a elu ebu ike na ala ike oriri. The mfe attachable abaghị uru pole na koo uzo ana achi achi na-abaghị uru ebu ikike.
Previous: abaghị uru pole
na-akwọ ụgbọala pole
abaghị uru pole